Tovolahy iray 20 taona no maty nisy nanindron’antsy ny faran’ny herinandro teo tao Mangarivotra raha nivoaka kely tsy lavitra ny trano fonenany. Raha araka ny fanazavan’ny renin’ity tovolahy ity dia mbola nipetrapetraka teo an-davarangana ilay zanany lahy tamin’ny 07 ora hariva niaraka tamin’ny namany. Nandeha nanatitra ny namany izy taorian’izay ary tsy niverina intsony. Olona sendra nahita no niantso ireo fianakaviany nahita ilay tovolahy efa nihosin-dra ka nentina namonjy hopitaly avy hatrany. Fotoana vitsy monja anefa dia efa tsy tratra intsony ny ainy ka ny vatana mangatsiakany sisa no nentina nody tao an-trano. Raha araka ny vaovao hatrany dia mpanendaka no nandatsaka ny ain’ity tovolahy ity. Tamin’ny fotoana nanindronany antsy ilay tovolahy io ihany dia tovolahy roa no efa nosamborin’ny mpitandro ny filaminana teo amin’ilay toerana. Efa mandeha ny fanadihadiana rehetra.